I-Amplats isalinde abasebenzi | isiZulu
Johannesburg - Babalelwa ku-12 000 abasebenzi be-Anglo American Platinum (Amplats) abaxoshwa nabasishaya indiva isiphakamiso senkampani sokuthi babuyele emsebenzini, kusho iNational Union of Mineworkers ngoLwesihlanu.
"Abanye abasebenzi abakwazi ukubuyela emsebenzini ngoba besaba ukusatshiswa eRustenburg," kusho okhulumela iNUM uLesiba Seshoka.
Le nkampani ekhiqiza i-platinum bebenethemba lokuthi isiphakamiso ebasibeka etafuleni sizoheha abasebenzi ukuba babuyele emathunjini omhlaba, kulandela ukuthi bazibandakanya esitelekeni esingekho emthethweni.
Kunalokho, abasebenzi bachithe uLwesibili, nobekungusuku olungumnqamulajuqu wokuthi babuyiselwe emsebenzini, belwa nonogada bemayini nephoyisa.
I-Amplats ngoLwesine ithe lesi siphakamiso sisamile.